Dagaal ka dhacay gobolka Baay & Shabaab badan oo la sheegay in…. - Awdinle Online
Dagaalka oo geystay khasaaro isgu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxaa Ciidamada AMISOM iyo kuwa Koonfur Galbeed oo dhinac ah iyo Al-Shabaab waxaa uu ku dhex-maray degmada qansaxdheere ee Gobolka Baay.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii ay Al-Shabaab weerareen saldhigyada Ciidamada, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus, iyada oo saraakiisha Ciidamada dowladda ay sheegeen inay iska caabiyeen weerarka kaga yimid Al-Shabaab.
Guddoomiye ku-xigeenka Amniga degmada Qansax Dheere Maxamed Mukhtaar Cabdi ayaa sheegay in dagaalka ay Al-Shabaab uga dileen 9 Xubnood tiro kalena ay ku dhaawaceen.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in Ciidamada Koonfur Galbeed & kuwa AMISOM ay sameeyeen howlgallo ay ku daba jiraan Xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee weerarka kusoo qaaday degmada qansaxdheere ee Gobolka Baay.
Ugu dambeyn Gudoomiye Maxamed Mukhtaar ayaa ugu ugu baaqay maamulka koonfurgalbeed iyo dowladda federaalka Soomaaliya inay gacan ka geeystaan taageerida ciidanka degmada kahowlgala iyo sidii looga adkaan lahaa Al-shabaab oo go’doon galiyay degmadaasi qansax dheere ee gobolka baay.
Degmada Qansax dheere ayaa waxaa ay kamid tahay degmooyinka u go’doonsan Al-Shabaab, waxaana mararka qaar weerar ku qaada Saldhigyada Ciidamada AMISOM & kuwa Maamulka Koonfur Galbeed Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab.
Previous articlePuntland oo walaac ka muujisay soo laba kacleynta Cudurka Coronavirus ah